iPhone si Mac Talooyin Center - Talo & Tricks u beddelashada Files dhexeeya iPhone iyo Mac
iPhone si Mac Talooyin Center - Files beddelashada ka iPhone si Mac ma noqon karo fududaynta
Halkan waa wax ka: dadka, sida adiga iyo igu, jeclahay isticmaalaya iPhone iyo Mac, si kastaba ha ahaatee, mararka qaar waxa ay dhab ahaantii waa adag tahay na si ay u gudbiyaan files dhexeeya iPhone iyo Mac, gaar ahaan nuqul ka files ka iPhone si Mac tan iyo Lugood bixisaa hal .Wadashaqayntaas ( ka Mac si iPhone KALIYA ). Tani waa sababta iPhone si Mac Talooyin Center ayaa la dhisay. Talooyin iyo tabaha for files dhexeeya iPhone iyo Mac wareejinta halkan soo ururay, aad bixiya in ay la tacaalaan files wareejinta u dhaxeeya si fudud oo dhan cayn kasta oo xal.
Bedelka Music dhexeeya iPhone iyo Mac
Raadinta jawaabaha loogu talagalay sidii ay u heeso ka iPhone wareejiyo cusub Mac, sida loo heeso ka iPhone wareejiyo iMac, sida ay u hagaagsan music ka Mac si iPhone aan tirtira iPhone? Akhri sida ay u ka iPhone wareejiyo music inay Mac Mac iyo ka in iPhone >>
Photos mashquulin meel aad u badan oo aad iPhone, ma qol videos iyo heeso dheeri ah ka tagin? Isku day in aad xaalkaa photos iPhone toogtay iPhoto, iyaga uga texeen galay slideshow oo lamid ah? Si kastaba, marka hore, ka iPhone photos wareejiyo si aad Mac >>
Nuqul Videos dhexeeya iPhone iyo Mac
Ma loo isticmaali iPhone si ay u qoraan qaar ka mid ah videos in uu korka la joogo aad qiimo? Waa wakhti ay ku soo dhoofsadaan videos ka iPhone si Mac hadda, sidoo kale ilaalinta fiican ama tafatir dheeraad ah. Wax dhibaato ah qaar ka mid ah syncing videos ka Mac si iPhone Xageeda, Ok, xali. View sida loo wareejiyo videos ka iPhone si Mac iyo dar videos si iPhone on Mac >>
Xiriirada Transfer dhexeeya iPhone iyo Mac
Waa qarow in ay lumiyaan xiriiro. Waxaan ku noolaan kartaa adiga oo aan heeso iyo videos on our iPhone, laakiin ma awoodin in ay lumiyaan xiriiro. Phone waxaa loo isticmaalaa si ay ula xiriiraan dadka, sida aad sameyn karto oo aan xiriiro? Si looga fogaado badiyay xiriiro, u bartaan sida loo wareejiyo xiriirada ka iPhone si Mac u gurmad iyo sida ay ku darto soo xiriiro si iPhone on Mac >>
, Inta badan files aad u baahan tahay waa la on your computer sax ah? Ok, kadib marka iPhone ah, wax caadiga ah tahay moodayay in aad samayso waa in aad u hagaagsan iPhone la Mac, sax? Marka aan sidaa yeelno, xiriirada, songs, videos, buugaagta, barnaamijyadooda, iyo ka badan waxaa loo diri doonaa adiga iPhone iyo iPhone iibsaday alaabta soo guuriyeen in aad Mac. Baro wax aasaasiga ah, sida ay u hagaagsan iPhone la Mac >>
Lacag maalin roobaad ma xun tahay, waa kuma? Bal yaa og waxa ku dhici doona geeska, sax? Taasi waa sababta aan u baahan tahay inaad xog iPhone gurmad si Mac si joogto ah. Haddii kale, marka aan lumin xog ku saabsan iPhone, waxaan aan dib u heli kartaa mar kale. View sida loo raad raac iPhone si Mac >>
Demi Android inay iPhone 1 Click
Apps ka iPhone Bedelka in Computer
Bedelka Music dhexeeya iPhone iyo PC
Ka iPhone Bedelka SMS si PC
Xiriirada ka iPhone dhaqaaq PC
Back Up iPhone in PC aan Lugood
Top 17 Apps Best u iPhone
U dayactir iPhone Broken
> Resource > Mac > iPhone si Mac Talooyin Center